I-Tutorial From Semalt On Indlela yokuqhafaza amaninzi amawebhusayithi awaziwayo ukusuka kwi-Wikipedia
Iiwebhusayithi ezinamandla zisebenzisa iirobhothi. iifayile ze-txt ukulawula nokulawula nayiphi na imisebenzi yokutshiza. Ezi ziza zikhuselwe ngu imigca ye-web nemigaqo-nkqubo yokukhusela ii-bloggers kunye nabathengisi ukuba bachithe iziza zabo. Kubaqalayo, ukukhwa kwewebhu kuyinkqubo yokuqokelela idatha kwiwebhusayithi kunye namaphepha ewebhu kwaye ulondoloze ulondoloze kwiifom ezifundwayo.
Ukufumana idatha efanelekileyo kwiiwebhsayithi ezinamandla kunokuba ngumsebenzi onzima. Ukwenza kube lula inkqubo yokukhutshwa kwedatha, i-webmasters isebenzisa iirobhothi ukufumana ulwazi oluyimfuneko ngokukhawuleza - kartons mieten. Iziza ezinamandla ziquka 'vumela' kwaye 'ungavumeli' izikhokelo ezixelela iiprobhothi apho kuvunyelwa khona ukukhwa kunye nalapho kungekho.
Ukukhangela iindawo ezidumileyo ezivela kwi-Wikipedia
Le tutorial ihlanganisa ukufundwa kwimeko eqhutyelwa nguBrendan Bailey ekutshitsheni indawo kwi-intanethi. U-Brendan waqala ngokuqokelela uluhlu lwamasayithi anamandla avela kwi-Wikipedia. Injongo ephambili yeBrendan kukufumana iiwebhusayithi ezivulekileyo kwiziko leedatha lewebhu ngokusekelwe kwi-robot. imithetho yeTxt. Ukuba uya kukhangela isayithi, qwalasela ukuhambela imiqathango yenkonzo yokukhusela iikopi zokuphulaphula.
Imithetho yokuqhawula isayithi ezinamandla
Ngezixhobo zedatha yokucinywa kwedatha, ukuhlenga isayithi ngumcimbi wokucofa. Uhlalutyo olunzulu malunga nendlela uBrendan Bailey ahlenga ngayo iindawo ze-Wikipedia, kunye neendlela ebezizisebenzisayo zichazwe ngezantsi:
Ngokwe-Case study ka-Brendan, iiwebhusayithi ezidumileyo zingabalwa njengeMix. Kwisesyiti yeepeyi, iiwebhsayithi ezinemixube yemithetho zimele 69%. Iibhola zeGoogle. I-txt ngumzekelo obalaseleyo weerobhothi ezixubekileyo. txt.
Gcwalisa Vumela, ngakolunye uhlangothi, ubhale 8%. Kule ngongoma, i-Complete Complete ithetha ukuba ii-robot zesayithi. Ifayile ye-txt inikeza iinkqubo ezizenzekelayo zokufikelela kwi-site yonke. I-SoundCloud ngumzekelo omhle wokuthatha. Eminye imizekelo yeendawo ezipheleleyo zivumelekile ziquka:
iiWebhsayithi ezinokuthi "azifakeli" zibhalwe kwi-11% yenani elipheleleyo elichazwe kwitshathi. Ukusetyenzana kuthetha izinto ezilandelayo zilandelayo: nokuba iisayithi azikho iirobhothi. ifayile ye-txt, okanye iisayithi azikho mithetho "Ummeli-Umsebenzisi. "Imizekelo yewebhusayithi apho iirobhothi. Ifayile ye-txt "Ayifakwanga" ibandakanya:
Gcwalisa izitifiketi ezingavumelekanga ukuba zivimbele iinkqubo ezizenzekelayo ngokususa amaziko abo. I-In Inxu lumeneko ngumzekelo obalaseleyo weeSayithi eziCwebileyo. Eminye imizekelo yeZakhiwo eziPheleleyo zeDisallow ziquka:
I-Web scraping isisombululo esona siphumo sokukhupha idatha. Nangona kunjalo, ukucima ezinye iiwebhsayithi ezinamandla kunokukufaka kwiinkathazo ezinkulu. Olu qeqesho luyakunceda ukuba uqonde kabanzi malunga neerobhothi. iifayile ze-txt kwaye ukhusele iingxaki ezinokuthi zenzeke kwixesha elizayo.